Kureva chirwere chinobata kombiuta - MediaWiki
Kureva chirwere chinobata kombiuta
This page is a translated version of the page How to report a bug and the translation is 4% complete.
Nzira iyi inotsanangura "'manyorero kana uchireva chirwere chabata kombiuta'"(basa) mu Wikimedia's task tracker (tarira Phabricator kuti unzwe zvizere). Basa rakanyorwa zvakanaka ndiro rine mukana mukuru wekutariswa nekukasira. Mabasa awa anoda kunorwa nechirungu. Kana ukanyora nechirungu, zama kushandisa maitiro ekushandura akaita se Google Translate.
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=How_to_report_a_bug/sn&oldid=5187611"